FILA DE SÃO MIGUEL DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Fila de São Miguel Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Lahaanshaha sawirka Vale da Palha
Eyga Lo'da ee Azores
The Cão de Fila de São Miguel (Azores Cattle Dog) wuxuu leeyahay astaamo gaar ah oo ah inuu yahay eey cabirkiisu dhexdhexaad yahay, kaas oo ka soocaya eeyaha kale ee lo'da ah, maadaama celcelis ahaan uu aad uga weyn yahay. Waa xayawaan laba jibbaaran, leh daaman aad u xoog badan, indho madow oo mugdi cad leh iyo murqaha oo si wanaagsan loo horumariyay jirridda iyo addimada. Waxay ku socdaan dabeecadda caadiga ah ee xannibaadda inyar oo futada ku taal gobolka dabada iyo badhida. Midabkoodu wuxuu ka kooban yahay casaanka-huruudda, xariijimo iyo cirro, sidoo kale xariiq ah, labada mugdi iyo iftiinka iftiinka sidoo kale wuxuu yeelan karaa balastar cad qaybta hore, garka, xabadka iyo cagaha. Dabada waa in lagu xiraa laf-dhabarka 2aad ama 3aad. Dhegaha si caadi ah ayaa loo gooyaa.
jack russell iyo isku darka terrier rat
The Cão de Fãila de São Miguel waa xayawaan rustic ah oo xukuma, awood u leh inay banaanka ku ekaadaan inta lagu jiro sanadka oo dhan iyagoo ilaalinaya xoolaha iyo qalabka loo isticmaalo beeraha. Waa caqli badan oo deg deg ah in la barto, fulinta amarro kala duwan. Sida eey loo adeegsaday kaxeynta lo'da caanaha sida caadiga ah qaniinaa si hoose si uusan u dhaawacin qanjidhada naaska ee lo'da, isagoo qaniinyada sare kaga dhacaya lo'da lumay. Waa eey shaqeynaya heer sare, laakiin sidoo kale eey waardiye wanaagsan oo ah hanti ama eey ilaalin ah. Waxay yeelan kartaa dabeecad aad u fiiqan, laakiin waa mid dabacsan oo uu la socdo sayidkiisa. Aad u caqli badan oo leh awood weyn oo wax lagu barto. Milkiilaha saxda ah, noocani wuxuu u sameeyaa waardiye aad u fiican iyo eey waardiye ah. Aad ayey u difaacaan dhulkooda. Waa inuu noqdaa si fiican u dhexgalay , waxaa la doorbidayaa marka uu yar yahay eeyo iyo dadba, gaar ahaan carruurta, maadaama ay u egtahay in dabeecadda ay ka digtoonaaneyso shisheeyaha, in kasta oo uu saaxiibtinimo badan la leeyahay kuwa uu yaqaan. Si loogu guuleysto Cão de Fila de São Miguel qoyska waa inuu gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Dhamaan xirmo wada shaqeyn hoosta hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran.
Dhererka: Ragga 19.5 - 24 inji (50 - 61 cm) Dumarka 19 - 23 inji (48 - 58 cm)
Miisaanka: Ragga 55 - 90 rodol (25 - 41 kg) Dumarka 45 - 80 rodol (21 - 36 kg)
Lama oga dhibaatooyinka caafimaad
Cão de Fila de Sãao Miguel waa inuu ku ag noolaadaa mulkiilihiisa. Eygan kuma habboona inuu ku noolaado guri. Waxay u baahan tahay shaqo la qabto.
Wuxuu ubaahanyahay jimicsi maalinle ah, oo ay kujiraan a maalin kasta, socod dheer . Waxay jeceshahay in la ordo, la ciyaaro oo la shaqeeyo.
Dharka caday dhawr jeer usbuucii
1427 jasiiradaha Azorean ayaa la ogaaday. Waxay ku dabooleen doog cagaaran oo ay adag tahay in la dhex galo, laakiin ma jirin xayawaanno naasley ah. Badmaaxiyiintii amiir Henry ayaa xoolo ku tuuray dhinaca badda ee jasiiradaha. Markay ahayd 1439 waxaa jiray xoolo badan oo lo 'ah São Miguel. Si xor ah ayaa loo koray, lo'diina waxay noqotay duurjoog. Sidaa darteed, baahi loo qabo eyga lo'da, ama fila ey, ayaa yimid. Eyga ugu muhiimsan wuxuu ahaa Safka Terceira (hadda bakhtiyey) oo markaa mid kale lagu kariyay molossers in la sameeyo Cão de Fila de São Miguel. Eygan ayaa noqday cunsur lama-huraan u ah dhaqashada lo'da, marka laga soo tago inuu aad u ilaaliyo hantida sayidkiisa iyo qoyskiisa.
Kooxda FCI 1 - Qeybta - Eeyaha lo'da oo leh imtixaan shaqo
maxaad bulldogs eg
Eeg tusaalooyin badan oo ah Fila de São Miguel Dog
Fila de São Miguel Sawirada 1
Fila de São Miguel Sawirada 2
Fila de São Miguel Sawirada 3
Fila de São Miguel Sawirada 4
chow adhijirro reer Jarmal ah oo isku dhafan eey
timo dheer isku darka ceesaan chihuahua
oranjo bisad timo dheer leh
feeder pitbull mix sawirada eey